Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - SS 3T 2016
NY ANDRAIKITRY NY FIANGONANA EO ANIVON'NY FIARAHA-MONINA
JOLAY - AOGOSITRA - SEPTAMBRA
Lesona 1 Famerenana amin'ny laoniny ny zava-drehetra 25/05 - 01/07
Lesona 2 Mamerina indray ny fanapahana 02/07 - 08/07
Lesona 3 Fahamarinana sy famindram-po (TT) 09/07 - 15/07
Lesona 4 Ny rariny sy ny famindram-po (TT) 16/07 - 22/07
Lesona 5 I Jesosy sy ny fanatrarana ny fiaraha-monina 23/07 - 29/07
Lesona 6 Nifangaro tamin'ny olona Jesosy 30/07 - 05/08
Lesona 7 Naniry izay hahasoa azy ireo Jesosy 06/08 - 12/08
Lesona 8 Naneho firaisam-po Jesosy 13/08 - 19/08
Lesona 9 Nanome izay nilain'izireo Jesosy 20/08 - 26/08
Lesona 10 Nahazo ny fitokiany Jesosy 27/08 - 02/09
Lesona 11 Hoy Jesosy : "Manaraha Ahy" 03/09 - 09/09
Lesona 12 Asa fitoriana eny an-tanan-dehibe amin'ny andro farany 10/09 - 16/09
Lesona 13 Ahoana no tokony ho fiandrasana? 17/09 - 23/09
Ny filazantsara iray manontolo
Nanangana ny Baiboliny teny anoloan’ny fiangonany ny pasitora iray. Rovitra ilay Baiboly sady rimbondrimbona. Tany amin’ny oniversite izy sy ny mpiara-mianatra taminy sasantsasany no nandinika io Baiboliny io sady nanisy tsipika teny ambanin’ireo andalan-teny miresaka momba ny fahamarinana, ny fahantrana, ny harena ary ny tsy rariny. Nohetezan’izy ireo avy eo ny andininy rehetra voakasik’ireo lohahevitra ireo. Rehefa vitan’izy ireo izany dia feno lavaka ilay Baiboly. Tena manana ny lanjany ho an’io Baiboly io tokoa ireo lohahevitra ireo hany ka maro ny fahabangana teo aminy rehefa nesorina tsy ho ao intsony ireo lohahevitra. Miteny amin’ny fomba mahery vaika sy amin’ny feo avo tokoa io Baiboly rovitra sy rimbona io mikasika izay zavatra maha-sarotiny an’Andriamanitra.
Tokony hilaza inona amintsika Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito io tantara io? Zavatra maro no tokony hambarany. Ny fikarohana dia mampiseho fa eo amin’ny 30 isan-jato eo ho eo amin’ny Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito no mirotsaka amin’ny fanamaivanana ny fahasahiranan’ny olona any ivelan’ny fiangonana. Ahoana ny amin’ireo 70 isan-jato sisa? Miantso ny fiangonan’ny andro farany iray manontolo i Jesôsy hitory sy hiaina ilay “filazantsara mandrakizay” iray manontolo (Apôk. 14:6).
Inona ilay filazantsara mandrakizay iray manontolo? Hita ao amin’ny Lio. 4:16-21 ny asa nanirahana an’i Jesôsy. Ireo andininy ireo dia maneho ny filazantsara iray manontolo mihoatra noho ny fitoriana ny fahamarinana momba ny famonjena amin’ny alalan’ny finoana fotsiny. Ny filazantsara no tokony ho ivon’izay rehetra ataontsika. Ampianarin’i Jesôsy fa ny fitoriana ny filazantsara ihany koa dia midika ho fanehoana fitiavana sy famindrampo amin’ny malahelo, ny noana, ny marary, ny torotoro fo, ny mijaly, ny voailikilika ary ny mpifatotra. Ny miaina ny filazantsara dia fanaovana ny marina sy fandrodanana izay nataon’ny devoly eto am-piandrasana ny fiavian’i Jesôsy.
Amin’ity telovolana ity isika dia handinika ny fitantarana manontolo momba io “filazantsara mandrakizay” io: hojerentsika ny asan’ny fiangonana eo amin’ny fitaomana ny manodidina azy amin’izany filazantsara izany. Ny “fiangonana”, raha ny famaritana omentsika, dia antokon’olona izay tsy mivelona ho an’ny tenany fotsiny. Nantsoina izy ireo hiaina sy hitory ny filazantsara mandrakizay araka ny asan’i Jesôsy. Midika io antso io fa hivelomana mihitsy ny filazantsara fa tsy torina fotsiny. Amin’ny fanomezantsika izay ilain’ireo manodidina antsika no isehoan’izany fiainana ny filazantsara izany.
Ahoana no fomba anompoan’ny fiangonanao ireo sahirana? Ny sampana rehetra eo anivon’ny fiangonana (ohatra: Fahasalamana, Fiainam-pianakaviana, Tanora, Sekoly Sabata, Diakona, sy ny sisa) dia miara-miasa hanompo ny fiarahamonina manodidina. Ankoatra izany, fiangonana maro no miasa amin’ny alalan’ny sampana miahy manokana ny asa atao eny anivon’ny fiaraha-monina. Izany sampan’asa izany dia mivelona amin’ny fitsipiky ny filazantsara ary manomana ny fomba hahazoan’ny rehetra mandre ny Tenin’Andriamanitra (ny Baiboly). Any amin’ny toerana sasany dia antsoina hoe Dôrkasy, Lehilahy advantista, na hafa koa izany sampana izany. Ohatra iray hafa tena maneho azy io ny ADRA (Adventist Development and Relief Agency). Tsy miainga mivantana avy eo amin’ny fiangonana ny asan’izy io fa ampahany iray manana ny maha-izy azy kosa izy eo amin’ny fanatrarana ireo sahirana.
Ahoana no fomba fanehoanao fankasitrahana manokana ny zavatra efa nataon’Andriamanitra ho anao tamin’ny alalan’i Kristy? Toy izao no fomba ilazan’ny mambran’ny fiangonana iray izany:
Nahita zazavavy kely iray aho teny an-dalana,
Nangatsiaka izy sady nangovitra amin’izato akanjo manify dia manify,
Tsy nantenainy akory ny hisakafo ara-dalàna.
Nanjary noana aho ka nanontany an’Andriamanitra:
“Fa nahoana no navelanao hiseho izao?
Nahoana no tsy mba misy zavatra ataonao akory manoloana izao?”
Tsy mbola niteny na inona na inona aloha Andriamanitra.
Ny alin’io dia novaliany tampoka izany:
“Tena nisy nataoko tokoa raha ny amin’izany.
Namorona anao Aho.”- Dwight Nelson, Pursuing the Passion of Jesus (Nampa, Idaho: Pacific Press® Publishing Association, 2005), t. 78.
Tamin’ny fotoana izay nanoratana ity tari-dalana fianarana ny Soratra Masina ho an’ny Lehibe ity dia filohan’ny Departemantan’ny Fandalinam-pinoana tao amin’ny Washington Adventist University any Takoma Park, Maryland, Etazonia i Gaspar Colón. I May-Ellen Colón kosa dia tale mpanampy teo anivon’ny Departemantan’ny Sekoly Sabata sy ny Asa Fitoriana ataon’ny tena manokana any amin’ny foibe maneran-tany, sady filohan’ny Sampana maneran-tany miahy ny asa atao eny anivon’ny fiarahamonina. Misiônera tany Afrika sy tany amin’ny Firaisana Sôvietika teo aloha izy ireo nandritra ny sivy taona. Manan-janaka roa efa lehibe izy ary zafikely anankiroa.